Dhageyso: Wasiirka Gaashaandhiga oo maalintii 2aad loo diidan yahay gudaha Magaalada Kismaayo, iyo Jeneral Fartaag oo Masuuliyiinta dowlada ku tilmaamey Qaswadayaal – idalenews.com
Wasiirka Difaaca Soomaaliya Mudane C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo kamid ah Wasiiro sadex ah oo maalintii labaad ku xayiran Garoonka Kismaayo ayaa ka hadlay socdaalkooda Magaalada Kismaayo.
Wasiirka ayaa sheegay Kismaayo inay shalay gaareen isaga iyo Wafti uu la socda oo ka mid ahaayeen Wasiirka Warfaafinta C/laahi Ciilmooge Xirsi Wasiirka Diinta iyo Awqaafta C/laahi Ebyan Nuur iyo Qaar kamid ah Saraakiil Ciidan oo iskugu jira AMISOM iyo Somali.
Dhageyso Wasiirka Gaashaandhiga oo ka hadlaayo howsha ay rabaan iney Kismaayo ka fuliyaan:
Mr Fiqi ayaa sheegay Kismayo inay u gaareen sidii ay u soo indha indhayn lahaayeen Xaaladaha nololeed ee dadka ku nool Kismaayo, maamulka deeganadaasi ka jirana kulamo ula soo qaadan lahaayeen.
Sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in talaabada ugu horeysa ee u qorsheysan ay tahay la socoshada xaalada ciidamada Xoogga Dalka ee halkaasi ku sugan iyo qarameynta ciidanka aan ka midka aheyn CXDS ee la dagaalamay maleeshiyaadka argagixisada ee Alshabaab.
Waxa uuna wasiirku hoosta ka qariiqay in ay dadaal ugu jiraan sidi ay xaquuqdooda ku heli lahaayeen isla markaana tababaro loo siinlahaa ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Jubbooyinka.
Qaybaha Hoose ka dhagayso Wasiirka.
Dhanka Kale, Ku xigeenka Axmed Madoobe Jeneral C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartag oo Warbaahinta la hadlay ayaa si kulul u weeraray Siyaasada dowladda ee Jubbooyinka iyo joogitaanka Wufuuda ka socota dowladda ee ku sugan Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
C/laahi Sheekh Ismaaciil ayaa sheegay Waftiga ka socda dowladda ee ku sugan Kismaayo inaan lasoo wargalin Maamulkooda markii ay kasoo baxayeen Xamar isla markaana ay ka war heleen iyagoo garoonka joogo, wuxuna tibaaxay Kismaayo inuu ka jiro Maamul si sharci daro ahna aan lagu soo gali karin Magaalada waa sida uu hadalka u dhigeen.
Wuxuu sheegay inaysan marnaba ogolaaneyn in magaalada iska yimaadaan wufuud aan qorshe ku socon sida kan haatan ku xayiran garoonka magaalada.
Madaxwayne ku xigeenka Jubbaland garabka Axmed Madoobe ayaa hoosta ka xariiqay Wufuuda ka socota dowladda ee Kismaayo iskaga soo dabalaabanaysa inay yihiin qaswadayaal isla markaana ay burburinta Maamul goboleedka Jubbaldn ku howlanyihiin.
Dhageyso Fartaag oo Masuuliyiinta Dowlada ee Kismaayo yimid ku tilmaamey qaswadayaal: